आईक्लाउडले ओएसएक्स र आईओएस मा वाइफाइ नेटवर्क समक्रमण गर्दछ म म्याकबाट हुँ
आईक्लाउडले OSX र iOS मा वाइफाइ नेटवर्कहरू सिंक गर्दछ
एप्पल जारी गरे पछि आईक्लाउड सेवा म्याक प्रणाली र आईडीभिसिस प्रणालीलाई आकार दिईएको छ त्यसैले थोरै बढि संभावनाहरू अभिव्यक्त हुन्छन्।
आज हामी तपाईंलाई बताउन जाँदैछ कसरी आईक्लाउड सेवा सक्षम छ वाइफाइ नेटवर्कहरू प्रबन्ध गर्नुहोस् जसमा तपाईं दुबै आफ्नो म्याक ल्यापटप र आफ्नो iOS उपकरणहरू संग कनेक्ट।
अधिक र अधिक, हामी जहाँ जान्छौं, हामी हामी जडान गर्न सक्छौं जहाँ वाईफाई नेटवर्क पाउन सक्षम हुनेछ। हामी मल्लमा जान्छौं र हामीसँग वाइफाइ नेटवर्क छ जुन हामी यसमा हुँदा हामी निःशुल्क रूपमा रमाइलो गर्न सक्छौं। हामी एउटा रेस्टुरेन्टमा जान्छौं र हामीसँग अर्को वाइफाइ छ, हाम्रो कार्यस्थलमा, समुद्र तटको एभिन्यूमा थोरै उस्तै, हामी हाम्रो साथीलाई भेट्न जान्छौं र उसलाई आफ्नो वाइफाइको पासवर्ड सोध्छौं। छोटकरीमा, के एक समय पछि हामी वाइफाइ नेटवर्क को धेरै प्रोफाइल भण्डारण गर्न सक्दछौं.
अब जब एप्पलको क्लाउड सेवा प्रत्यक्ष हुन्छ। आईक्लाउड ती वाइफाइको सबै प्रोफाइलहरू समक्रमण गर्न सक्षम छ तपाइँको कम्प्युटरहरू र तपाइँको आईओएस यन्त्रहरू बीच स्वचालित रूपमा जसले गर्दा यदि पहिले तपाइँले तपाइँको आईफोनसँग एकमा जडान गर्नुभयो भने निश्चित वाइफाइ नेटवर्क, तपाइँ देख्नुहुनेछ कि त्यो प्रोफाइल र यसको पासवर्ड तपाइँको म्याकमा एक समान तरीकाले भण्डार गरिएको छ, त्यसैले यदि तपाइँ पछि त्यो म्याकको साथ वाइफाइको दायरा प्रविष्ट गर्नुभयो भने, यो तुरून्त जडान हुनेछ पासवर्ड फेरि नगरीकन।
आईक्लाउडमा तपाईंले कुन वाइफाइ नेटवर्कहरू बचत गर्नुभयो भनेर हेर्न तपाईंले आफ्नो म्याकसँग गर्नुपर्नेछ, किनकि आईफोन वा आईप्याडका साथ तपाईं सक्षम हुनुहुने छैन। यो गर्नका लागि जानुहोस् प्रणाली प्राथमिकताहरू र सेक्सन प्रविष्ट गर्नुहोस् लाल.
स्क्रिनमा देखा पर्नेछ, बाँया साइडबारमा तपाईं आफ्नो म्याकले विभिन्न नेटवर्क जडानहरू देख्न सक्नुहुनेछ। तपाईंले बचत गर्नुभएको प्रोफाइलहरू हेर्न वाइफाइ जडानमा क्लिक गर्नुहोस्।
अब तल्लो दायाँ बटनमा क्लिक गर्नुहोस् "उन्नत ..." र एउटा विन्डो देखा पर्ने छ जसमा तपाईं सबै वाइफाइ नेटवर्क प्रोफाइलहरू देख्न सक्नुहुनेछ जुन तपाईंले आफ्नो कुनै पनि उपकरणहरूसँग जडान गर्नुभयो।
त्यो विन्डोबाट तपाई वाइफाइ नेटवर्क प्रबन्ध गर्न सक्नुहुनेछ र तपाईले चाहानु भएको मानिसलाई मेट्न पनि सक्नुहुन्छ। अवश्य पनि, त्यो दिमागमा राख्नुहोस् यदि तपाईं त्यो सूचीबाट वाइफाइ नेटवर्क हटाउनुहुन्छ भने, यो स्वचालित रूपमा आईक्लाउड क्लाउडबाट हटाइनेछ र तुरून्त तपाईंको iDevices उपकरणहरूबाट।
लेखको पूर्ण मार्ग: म म्याकबाट हुँ » एप्पल » हाम्रो बारेमा » आईक्लाउडले OSX र iOS मा वाइफाइ नेटवर्कहरू सिंक गर्दछ
धेरै राम्रो जानकारी, धन्यवाद र अभिवादन
राम्रो लेख, मलाई यो सुविधाको बारेमा कुनै विचार थिएन
Trakoneta लाई जवाफ दिनुहोस्